9ka ka soo hadhay 17ka
Saturday January 05, 2019 - 22:17:44 in Wararka by Super Admin
Qaybta 3aad Waxa aan xabsiga dhexe ee Hargeysa ku soo arkay
Waxa aan ku soo arkay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa intii aan ku xidhnaa maxaabiis 9 ah oo ka cabanaysa in ay ku joogaan muddodhaaf oo sheegay in ay dhammaysteen mudadii lagu xukumay , labo ka mida ah waxa ay ahaayeen kuwo dhul yaal ah oo loogu adeego jiifka , waxa loo haystaa waxa loogu yeedho "Argagixiso” waxa la soo xidhay sanadihii 2004 iyo 2005 , waxaana lagu kala xukumay saddex xukun, qaar waxa lagu xukumay dil, qaarna xabsi-daa’in halka qaar kalena lagu xukumay 20 sanadood . madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin ayaa sanadkii 2007 cafis u fidiyey 17 maxbuus oo ay ka mid ahaayeen. Cafiskii waxa uu ka dhigay kooxdii dilka ku xukunayd 20 sano , kuwii ku xukunaa xabsi-daa’inkana waxa uu ka dhigay 15 sano , kuwii 20ka sano ku xukunaa waxa uu ka dhigay 10 sano.Markii uu cafiskii sharci noqdoya 6 ayaa ku baxay cafiskaas intuu uu joogay Madaxweyne Rayaale , 2 kalenea waxa bexeen xiligii madaxweyne Siilaanyo iyada oo la raacayo cafiskii madaxweyne Rayaale ee 2007dii , isu gayn 8 maxbuus ayaa ku baxay cafiskaas halka ay illaa hadda ku jiraan xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa 9ka maxbuus ee aan halkaa ku soo arkay oo kala ah : 1-C/raxmaan Maxamuud Jaamac 2- C/raxmaan Cismaan Yuusuf 3- Daa’uud Saalax Iidle 4-Axmed Cilmi Samatar 5- Cali Muuse Maxamuud 6- Cali Maxamuud Cawaale 7- Farxaan Cabdillaahi 8- Jaamac Cabdi Ismaaciil 9- Maxamed Cali Ciise .
Maxaa 9kaa loo haystaa oo ay u bixiwaayeen?
Sanadkii 2008 markii ay qaraxyadu ka dheceen magaalada Hargeysa kaddib ayuu sheegay madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin in uu ka noqday cafiskiisii , oo xukunkuna sidii hore ahaanayo marka laga reebo kuwii dilka lagu xukumay oo ka dhigay xabsi-daa’in, halkaas buu muranku ka dhashay , maxaabiista iyo qareenadoodu waxa ay ku doodayaan madaxweynuhu xaq buu u leeyahay in cafis fidiyo balse xaq uma laha in uu cafis uu fidiyey ka noqdo .
Waxa aan ku soo gabogabaynayaa oo iswaydiin mudan : 1-Hadii loo arkayey in uu madaxweyne Rayaale ka noqday cafiskiisii, muxuu madaxweyne Siilaanyo xiligiisii waraaqada cafiska Rayaale isga oo raacaya ugu sii daayey 2 ka mid ah 17kii maxbuus ? 2- Madaxweynuhu xaq ma u leeyahay in cafis uu fidiyey ka noqdo ?